Nguva yekuchinja kukuru uye huru shanduko: saina chikumbiro: Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pa 12 May 2020	• 22 Comments
Dambudziko re corona rinotimanikidza kufunga nezve shanduko dzakanyanya. Ini ndakatozvizivisa mushure mekunge webhusaiti yangu yakanangana neDDoS kurwiswa kwehafu yezuva. Ndakaita chirevo chisina kujeka ndichiti: "Chirongwa changu ndechekuburitsa hurongwa hwemberi munguva pfupi iri kutevera kudzikisira nekuparadza hurumende iyi nehurongwa hwese."
Ini ndakashanda pachirongwa ichocho kwenguva yakareba uye ndokuchiratidzira kune vazhinji kumashure kwezvibodzwa. Ichi chirongwa chiri pamusoro pekutungamira rusununguko, kuburikidza neInternet kuvhota system iyo yakachengetedzwa kuburikidza ne blockchain tekinoroji.
Hongu, kune ngozi kune tekinoroji, asi njodzi huru iri mumupiramidhi wemagetsi. Iyo hurongwa inoda kuvandudzwa uye kutendeuka. Izvi zvinokwanisika chete kana yakarongwa nehungwaru. Simba harifanire kuenda kunzvimbo yepakati, asi simba rinofanira kuenda kuvanhu.
Tiri kuzozviita zvakasiyana!
Zvakanyatsosiyana! Uye rubatsiro rwako runodiwa. Mibvunzo mishoma kutanga:
Iwe unoda kuti iwe kana vana vako mugare mutirongo yedhijitari?
Iwe unoda here iwe kana vana vako kumanikidzwa papombi iyo iwe usingazive izvo zvirimo kunze kweizvo "nyanzvi" dzinokuudza?
Iwe unoda here kusundidzirwa muhurumende-inomira-komisheni system uko kwese kunoongororwa kuburikidza neBig Data?
Aihwa? Ino ndiyo nguva yekugadzirisa hurongwa sezvatinoziva nezvayo! Nguva yenyika yakasununguka ine democracy yakananga: nzira itsva yekugara pamwechete. Nguva yekubvisa iyo papaji cabinet uye korona.
Iyo tsika yekare yakavakirwa kurusununguko rwekunyepedzera, uko mapipi ese mumapato ezvematongerwo enyika anoita kunge akadzidziswa kungoshandira korona chete uye achipa vanhu kunyepa kwesarudzo.
Ivo vanopa sarudzo inokodzera iro boka kune yega yega pfungwa uye yega yega kuravira munharaunda uye nharo kuburikidza nekujeka kupokana kuchengetedza simba rimwechete nehurongwa kumashure kwezviratidziro.
Kupikisa, kuruboshwe, kurudyi, kwakasununguka, vese vanopika kutendeka kune korona uye nhaurwa dzinotyisa munhau, nhaurirano panguva dzesarudzo; varipo chete kuti vaite kuti vanhu vatende kuti izwi ravo rinonzwika.
Democracy sekuziva kwedu hupenyu hwedu hwese kure. Isu tinorarama muunganidzwa hypnosis, kuunganidzwa kwemapofu.
Tenda kuti zvinogona kuitwa zvakasiyana
Nekuti isu tinorarama mune yehukama tsika kubva pazera rekutanga, isu hatizvizive zviri nani. Iwo mamiriro edu atinonamatira.
"Isu tinongoda hurumende uyezve demokrasi ndiyo fomu yakanakisa." Kana zvanyatsorongwa zvemukati, ndipo pazvinowirirana zvibvumirano uye zvinoshanda ”, tinofunga.
"Ipapo munhu wese anoshandisa asphalt yakafanana, isu tine zvifambiso zvakanaka zveveruzhinji, mutero wakarongeka zvakanyatsorongeka uye takagadziridza zvakanaka muzvinhu zvese zvehupenyu hwedu."
Kune vamwe, Emperor ane zvipfeko chaizvo
Vamwe vanhu havanyatsoona kuti mambo haasi kupfeka zvipfeko. Ivo vanotenda zvakasimba muhurongwa sekuziva kwedu uye vazhinji vanovimba uye vanoida mukuzara kwavo.
Izvo chete panguva yekunetseka kwekorona apo vamwe vanotanga kuona kuti isu zvishoma nezvishoma tiri kushandisirwa nzira yehunyanzvi yemacommunist. Vamwe vanozoona izvi sekufambisira mberi kunodiwa; kufambira mberi kunogona kuchengetedzwa kudzivirira ramangwana fungemics uye chengetedza zvakatipoteredza.
Asi izvozvo zvinoda here kuti huwandu hwevanhu vaiswe mune yehunyanzvi hwekudzora hunyanzvi hwewebhu kana kuti matambudziko mazhinji epasirese ari kukonzerwa nevanhu vakapfuma vane simba vanoita mari kubva kumishonga, mafuta, kugadzirwa kwemazhinji uye zvichingodaro?
Korona, imba yedu youshe
Imba yedu yeumambo yakatamba yakanaka mune izvi. Izvo zvine simba ravo uye capital inonyanya kubviswa kwezvinhu zvakaomeswa uye mafuta. Ipapo hatisi kutaura nezve rima zvinhu kubva zvakapfuura.
Uye vezvematongerwo enyika vanopika kuti vaizovimbika kunaani? Ku 'korona'. Vanopika kutendeka kunechisimba chemagetsi chinoratidzira mitemo yese uye kune avo vatongi, vatungamiriri, magweta uye mapurisa vanopika kuti vaizoteerera. Ivo havapike kutendeka kune vanhu, asi kune korona.
Korona inotonga nge "Nyasha dzaMwari". Hapana anogona kuratidza kuti inyasha dzaMwari uye kuti simba iri mhino yemhesi.
Iyo tsika yekutenda iyo munhu wese munharaunda akagadziriswa, nekuti vabereki nasekuru, sekuru uye shamwari: Wese munhu ane chimiro chenhema uye saka hapana chaanoziva chiri nani.
Tinogona kuramba tichivimba nehurongwa huripo, urwo huri kuramba hunowedzera kana tichigona kuvimba kuti kana tikazvitakura, tinokwanisawo kuronga zvinhu zvakanaka. Hatigone kurasa zvese zvigadzirwa zvounyanzvi zvatakajairirwa panguva imwe chete, hatigone isu nekukasira kurarama pasina masangano uye sangano. Isu tinokwanisa, zvakadaro, kudzoreredza hutongi hwayo nemitsara yekuita sarudzo.
Hurumende inofanirwa kuve nevamiriri chaivo vevanhu vanopika kwete nokutendeka kune korona, asi kuvanhu. Hunhu hunofanirwa kuve nechirevo chakananga nezvisarudzo. Iwe unotenda here kuti izvi hazvigoneke, nekuti vanhu vazhinji vane ruzivo rwakanyanya nezvezvakawandisa zvinhu zvinhu? Iyo nharo yakanaka, asi pamwe zvinhu zvakawanda zvinongoda kurerutswa.
Kana vanhu vacho vasingade kuwedzera muyero, saka panenge pasina kuwedzera chiyero. Kana vanhu vakafunga kuti media iri kutanga kutaridzika sekunge inhema, saka inofanira kuve yakatenderwa pasi. Kana vanhu vasingade kuferefetwa, panogona kunge pasisina censorship. Uye zvichingodaro, zvichingodaro.
Kudzoserwa kwechimiro chemagetsi
Asi zvese zvinotanga nekudzoreredza mitsara yesimba. Vanofanira kufamba vachienda kuvanhu panzvimbo yekorona. Vanofanira kumhanyira kumunhu; kuvanhu. Magavhuna akasarudzwa zvakananga nevanhu anofanirwa kusarudzwa nevhoti dzakananga uye vanopika mhiko kuvanhu. Zvakare vatongi vese, vashandi vehurumende, mapurisa, mauto, magweta, nezvimwe. Zvese zvinofanirwa kupika kutendeka kuvanhu uye zvese zvinogona kupunzika nehuwandu.
Direct demokrasi inogona kuitwa inogoneka nehunyanzvi. Tekinoroji yeBlockchain inogona kuona kuti iwe unokwanisa kurega izwi revanhu richitaura zvisina kunaka uye zvisina kusvibiswa. Izvo hazvisi zvishoma zvakashamisa mazano here? Panogona kuve nekutsigirwa kweizvi here? Paunonzwa kuti Elon Musk arikufarira, uri kungo rira nzeve dzako here?
Kuvhota kubva 'mugore'
Chero ani zvake anoda kuvhota anogona kutora chikamu musarudzo yekuita sarudzo maererano nekubvumidzwa kwemitemo nemitemo, uye vane zuva rekupera. Kuvhota kunoitwa kuburikidza nekombuta yako kana runhare rwakabatana nerudzi rwechiratidzo. Chekutanga pane zvese, isu tinofanirwa kuongorora rese rondedzero yemirairo iripo: 'inogona kugara' kana 'inofanira kuenda'. Ehe, kurerutsa uye kurerutsa panzvimbo yemberi yanhasi yakaoma.
Pro uye con's
Izvi zvinoreva zvakare kuti tinofanirwa kubatanidza ma multinationals makuru kune ino fanika system. Mushure mezvose, isu tinofanirwa kuda kubvisa simba revanhu vakaita saBill Gates. Kudzokorodza kwakafanana kwesimba kunogona kuitawo ikoko.
Iwo ma con ari nyore kunyora. Isu tinofanirwa chaizvo kudzora tekinoroji uye data hombe uye ndiyo nzira yatinogona kudyisa system iyoyo.
Haasi Elon Musk here iye anoda kusembera pfungwa dzedu mugore uye nekuzvibatanidza neAI. Ko Bill magedhi haana kukumbira paten 2020-060606 kuita kuti huropi hwedu huvharwe mu blockchain? Ehe, asi tinogona kuvhota izvozvo. Isu tinogona kuderedza tekinoroji uye tinoda kuti AI vanogadzira vasape AI yemahara rein.
Vazhinji vanogona kuzviwana zvakaoma kuisa mutemo wese kana sarudzo pamberi pevanhu. Ipapo vanhu vaizove nebasa rezuva pane zvese izvo sarudzo vozopedzisira vasinganetsi. Nekudaro, zvinogona zvakare kureva kuti vatungamiriri vanokosheswa kana kutongwa nekuda kwekureruka uye kupfupika panzvimbo pekutaurirana kweshamba kwatava isu kubva kwavari. Saka ivo vanofanirwa kuendesa basa riri nyore uye rakajeka saka tinoda mhando dzakasiyana dzevatyairi.
Zvinoratidzika kunge zvisiri izvo zvinofanirwa kutungamira kune shanduko yakanaka: mutemo unobva kune huwandu uchienda kumhando.
Zvakanakisa ndezvekuti isu tinogona kuisa mabhureki pachiyero uye centralization uye kuenda kubva kune kuoma kunzwisisa. Chimwe chirevo ndechekuti tinowana vamiririri vevanhu pachinzvimbo chevanhu vanomiririra pachivande mari yakakura uye korona. Miriri wevanhu unofanirwa kuve zvakare izvo zvinoreva rechokwadi rezwi iro.
Ndiwo maitiro aunoita iwe
Tinotanga nekuramba tsika isiriyo yebumbiro yatiri izvozvi. Asina kusimbiswa zvinoreva kuti zvinopesana nekodzero dzakakosha dzevanhu.
Bumbiro rinosainwa korona, uye mitemo zvakare inosainwa nekorona. Mune dambudziko re corona, takaona kuti hurumende dzinowanzoregeredza bumbiro uye nekukurumidza vanofunga mitemo mitsva inodarika bumbiro. Isu tinofanirwa kudzokera kuheyo yekodzero dzakakosha kwete musimboti yemitemo. Zvichienderana nekodzero iyoyo yakakosha, munhu wese ane kodzero dzakaenzana. Ndokusaka demokrasi yakananga ndiyo mhinduro.
Nhanho 1 saka ndiyo tsika yekare yakavakirwa pamusoro korona uye kuramba kuratidzika kwerusununguko. Izvi zvinoreva kutora chinzvimbo icho icho chiremera chatinofunga chiripo hachisi chebumbiro. Hakuna nyasha dzaMwari uye panofanirwa kuve nekupika kwekuvimbika kune vanhu.
Izvi zvinoreva kuti tinogona kuramba chirango, kutonga uye marango nechinzvimbo:
“Hakuna munhu ane simba pamusoro pangu nekuti zvigaro nemirau zvinoratidzwa nekorona. Korona iyi yakavakirwa munyasha dzaMwari. Ese masisitendi akadai sematare, vatungamiriri vemitero, kuongorora, nezvimwewo, kupika kutendeka kune korona. Vatongi vese, vezvematongerwo enyika, mauto, mapurisa uye nezvimwe zvinopika kuzviisa pasi korona. "Havana simba pamusoro pedu."
Saka danho 1 ndiko kuramba chero zviremera, kuramba faindi nechirango uye kuramba mutero. Tinofanira kusiya tsika yekare.
Kana iwe ukauya kudare, iwe unogona kunongedza kumutongi kuti anopika mhiko kune korona (nyasha dzaMwari) uye saka haana masimba pamusoro pako. Iwe unogona kunongedzera kumutemo wakatorwa nekorona (nyasha dzaMwari). Wakasununguka kuenda.
Tiri kuvaka sisitimu nyowani, nekupa chikumbiro chakasainwa nevanhu vazhinji sezvinobvira pano pane saiti. Chikumbiro ichocho chinotumirwa kuhurumende isiri yavo uye korona uye inotaura kuti ivo vanofanirwa kusiya chigaro.
Isu tinomira kutarisa TV, terera kune vezvematongerwo enyika uye vezvematongerwo enyika, uye tinoziva kuti zvemagariro enhau zvakare chishandiso mumaoko evanokanganisa.
Isu tinoramba masimba ehurumende yemuno, hurumende yenyika neBrussels uye tinotanga kubva pakatanga.
Hushumiro hunogona kuramba huripo uye vanongoda kushambadzira chirevo pamusoro pekutungamira kwavo zvemari. Vatungamiriri vemashumiro aya vanofanirwa kupika kutendeka kuvanhu uye nekukurumidza vanotanga kuongorora rusununguko-kudzora matanho nemitemo.
Ministry yemari inofanirwa kuratidza pakubata bhatani kuti chii chiri muhari yemutero uye kuti mangani zvikwereti zvaakaitiswa.
Izvo zvikwereti zvinofanirwa kurambwa uye kuiswa kune zero. Isu tinobva tangoshandura kuenda ku bitcoin uye kurega iyo yeuro nedhora. Simba uye pesvedzero yeEuropean Central Bank nemamwe mabhangi anofanirawo kupererwa. Ivo vakadhinda mari kunze kwese uye kuti fiat mari system is bankrupt.
"Chikwereti chenyika chinofanirwa kurambwa nekukasira ku zero."
Vanhu vacho vanopihwa mukana wekuvhura bitcoin account kwevhiki 1 uye Ministry of Finance inobva yaisa munhu wese nehuwandu hwemari 1 bitcoin.
Bitcoin inopa iyo yekuvhara. Hapasinazve mari yekubiwa, asi itsva yakafukidzwa mari, uko bitcoin ndiyo itsva "goridhe".
Wese munhu anowana mubairo wekutanga. Izvi zvakafanana neyemakomisheni system irikushandirwa nehurumende, asi nekuda kwekuti mutsara wemasimba unoenda kune vanhu uye wakananga demokrasi unogadzwa, njodzi yehurumende yeutongi inoderedzwa.
Vatengesi nemakambani vanopihwa mwedzi kuti vaise system inobvumira kubhadharisa bitcoin, asi pakarepo gamuchira yakananga bitcoin transaction senzira yekubhadhara.
Dhipatimendi reMukati rakapihwa mwedzi 1 yekumisikidza nzira yekuvhotera yakananga kuvhota, inobvumira mitemo kuunzwa kuruzhinji kuti irambe kana kuongororwa.
DigiD inogona kushandiswa kuvhota, asi kuwedzeredza manhamba kuburikidza nekuzivikanwa kwechiso kana gwaro redhijitari rekudzivirira rinogona kungobvumidzwa neruzhinji.
Yese mitemo iripo haibvumirwe ipapo. Tiri kuzoisa nguva yekubuda chikamu. Vasimbisi, vatongi, mauto, mapurisa pamwe nematare vanorega mabasa avo.
Ministry of the Interior inofanirawo kuburitsa blockchain kuvhota system mukati memwedzi, iyo vanhu vanogona pakarepo kusarudza vamiririri vayo.
Pachave nemumiriri mumwe akasarudzika pamashumiro ega ega uye mumiriri iyeye anogona kusarudzwa nevazhinji kubva kuvhoti.
Vatungamiriri vatsva ava vanofanirwa kutanga nekukasira nekutaura vhiki nevhiki kuvanhu kuburikidza nekutaurirana zvakananga paYouTube kana mamwe ma media enhau.
Ivo vanobva vaita tarisa huwandu hwemitemo uye vanoona kuti ikozvino tangle nehuwandu hwemitemo hunopedzwa uye hupfupikiswa mune huwandu iyo inosvika makumi mashanu pahushumiro.
Mitemo mitsva yekutanga inopihwa kuvanhu se 'mitsva yenharaunda' mutemo kuburikidza nedemo uye pfupiso yemazwi 1000.
Vanhu vacho vanogona kubvumidza, kuramba kana kudzosa iyi 'nharaunda mirairo' kuburikidza ne-blockchain nzira yekuvhota kuti iongororwe.
Nhau dzinofanira kumisa kutepfenyura nhau nenhepfenyuro zvirongwa. Panofanirwa kuve neyakazara midhiya nguva kunze kusvikira vamiriri vevanhu vatsva vadzokorora hurongwa hwese.
Ivo vanofanirwa saka kutarisa mugwara rese renhepfenyuro nemapepanhau ese, uye zvakare kuve nechokwadi chekuti vanhu vanoshandirwa basa panzvimbo yekare yakarongeka.
* mashoko omuzasi
Kuvhara pasi mutero mutero ndewenguva pfupi. Kumiswa. Makumi emakumi emamirioni avanhu kubva kune avo vese vanofanirwa kubatsira huwandu hwevanhu kubva panguva yedambudziko reCorona vanobva kupi? Iyo mari inodhindwa kunze kwenyika. Iyo yose yezvemari system yakavakirwa pamari ye fiat (isina kuvharwa nechero chinhu chemuviri uye chakadhindwa pasi).
Ehezve, kubhuroka mutero mutero hakusi kwekupedzisira. Izvo ndezvenguva pfupi, kusvikira vamiriri vevanhu vatsva (avo vanobva vanyatsomiririra vanhu) vamisikidzwa pamashumiro uye hurongwa hwese hunogona kushambidzwa nekugadziriswa.
Kupera kwemutero hakuzove kwekupedzisira, asi hurongwa hunoda kucheneswa kubva pamabhirioni anoyerera akananga kuEU uye akananga kuECB.
Tichazozvishandisa sei? Izvi zvinotanga nechikumbiro chakajeka, mauri unogona kutaura pachako kuti unoda kuve shanduko. Tinogona kutaura nezve kuziva uye kusimuka, asi iyo chete shanduko inouya kubva pachiito. Verenga zvinongedzo kubva mukukumbira pano uyezve unokanda vhoti yako. Chete pamwe chete tinogona kuita shanduko uye kuti zvese zvinotanga nekuedza kwedu pachedu.
Nezvikumbiro izvi tinozivisa:
Kuti korona haina simba
Kuti hurumende inofanira kuisa pakarepo mabasa ayo
Kuti zvese mirairo nemirairo zvinobva zvave zvisina basa uye zvichidzokororwa
Kuti zvese zvinosimbiswa zvinomiswa ipapo
Kuti vateresi vanobva vangomiswa
Izvo faindi hazvibvumirwi uye kuunganidza kunamiswa
Kuti mapurisa, vatongi, mauto, vatongi, vanoongorora, vanoongorora uye vashandi vese vehurumende vanofanirwa kupika kuti vachatendeka kuvanhu
Kuti chikwereti chenyika hachishande
Kuti izvo zvechikwereti zveECB nevamwe vakweretesi hazvina basa
Kuti pachave nehutongi hwakananga (senge zvinotsanangurwa apa)
Nezvikumbiro izvi tinokumbira:
Pangosvika kubviswa kwemabasa amambo, mambokadzi, nhengo dzemakamuri ekutanga nerechipiri makamuri nemakomishini
Kuvandudzwa kwakananga - uye kuburitswa mukati memwedzi 1 - yevheti ye blockchain yekuvhota neBazi Rezvemari, iro rinogona kusarudzwa mumiriri mutsva (mumiriri mumwechete pashumiro imwe, kugadzwa uye kuvhota kuburikidza nevhoti yechacha blockchain)
Kuti Ministry yemari inoisa huwandu hwe 1 bitcoin mukati meNetherlands mukati mevhiki 1
Ruzhinji kuyedzwa kwekorona uye vezvematongerwo enyika kuburikidza neye blockchain kuvhota system, kusanganisira chiyero uye zviri mumutsara
Saka enda kune webhusaiti itsva ikozvino, saina chikumbiro uye / kana uve nhengo:
Hurumende yeRutte III yehurumende yezvematongerwo enyika haisisiripo
Tags: blockchain, corona dambudziko, korona, democracy, direct, Featured, ushumiri, vashumiri, chikumbiro, political, zvematongerwo enyika, vhoti, Michina, change
XanderN akanyora kuti:
12 May 2020 pa 21: 57
Ndiri kuona izvi zvakanyanya sepfungwa yekuti chinangwa chekupera chiwedzerwe, kwete chimwe chinhu chinozoitwa nekukasira. Chaos yakavimbiswa, kana iwe uchiita izvi. Misa mutero? Ibva waisa mamirioni evashandi vehurumende kunze kwebasa, mapurojekiti akawanda ari kushandiswa nemazana ezviuru zvevanhu achauya kuzomira, ndege huru yekumusoro ichatanga (kunze kwekunge nyika yose yatora chikamu kamwechete), nezvimwewo.
Iko-nhanho-nhanho shanduko saka zvinoita senge zvakanyanya kubudirira. Iwe unozofanira kutanga wanyatso kupana ruzivo rwekutaura, kureva midhiya. Kana vanhu vachifanira kusarudza pane zvese, iwe unofanirwa kuve nechokwadi kuti vanowana yakatendeseka nyaya yezvakanaka nezvakakora zvesarudzo imwe neimwe. Asi ini ndinotya nekuvimbika chimiro chevanhu, icho chinopesana nemhando dzose dzekuchinja, uye emo zvakanyanya kubata. Iwe unogona saka kuve nechokwadi chekuti kana, semuenzaniso, mugwagwa mutsva unofanirwa kuvakwa kune imwe nzvimbo, uye vanowana vamwe vanhu pamberi pekamera vanogunun'una kuti nzira iyi iri padyo nedzimba dzavo, kana kuburikidza nedondo, makumi mapfumbamwe kubva pagumi. vanhu vanozovhota ZVAKAWANDA.
Uye saka zvichave nemapurojekiti akawanda, ndinofunga. Ndiri kutya kuti ipapo kwete kuzhinji kuchaburukira pasi zvakare, uye zvechokwadi muchaguma mune yakasarudzika nzira yemakomisheni iyo ichave yakafanana neSoviet Union, yakawedzerwa nehunyanzvi hwekutanga. Handifunge kuti inyika iri nani kurarama mairi.
Ini ndinofunga, sewe, kuti hurongwa hwazvino hwave hwane nguva yakanakisa, uye hwakadzikiswa nehuwori, nepotism uye nemhando dzese dzeboka rekuteedzera dzakapihwa simba rakawandisa. Iyo Royal Mhuri mune chero mamiriro ezvinhu yakanyanyisa nzvimbo yakachengetedzeka (kunyangwe iyo wmb ingangoramba iri senge rudzi rwe'shumiro 'yeNetherlands-Rokukwidziridza kana -Folklore kana chimwe chinhu, asi rakatorerwa masimba ese). Saka rinofanira kunge rakasiyana, asi paridza izvozvo mumakore angangoita gumi kana kupfuura, randinofunga kuti rakakurumidza, kupiwa kurudziro huru dzinofanirwa kuitika. Munhu, vanhu, anofanira kukwanisa kubata nazvo izvo zvepfungwa.
12 May 2020 pa 22: 40
Kujekesa: Chikwereti chemutero ndechechinguvana.
Kune kupi makumi emabhiriyoni emabhiriyoni anongoerekana abvepi izvo zvinofanirwa kubatsira huwandu hwevanhu kubuda mumoto panguva yeKutambudzika?
Iyo mari inodhindwa kunze kwenyika. Iyo yose yezvemari system yakavakirwa pamari ye fiat (isina kuvharwa nechero chinhu chemuviri uye yakadhindwa zvisinga tsanangurike)
Ehezve, kubhuroka mutero mutero hakusi kwekupedzisira. Ndokusaka zvakare ichiti 'kumiswa'. Izvo ndezvenguva pfupi, kusvikira vamiriri vevanhu vatsva (avo vanobva vanyatsomiririra vanhu) vamisikidzwa pamashumiro uye hurongwa hwese hunogona kushambidzwa nekugadziriswa.
Kupera kwemutero mutero hakuzove kwekupedzisira, asi kunofanirwa kucheneswa kubva kumabhirioni makuru ekuyerera kuenda kuEU nekunanga kuECB.
Funga nezvazvo zvakare.
12 May 2020 pa 22: 53
Tsananguro yakanaka nezve mari ye fiat (kubaya kuseka uku)
12 May 2020 pa 22: 58
Uye izvi zvichiri
12 May 2020 pa 23: 06
Uye kutaura chokwadi, ini handitendi shanduko-nhanho-nhanho.zvinogona kuitwa zvese nekukasira uye zvinofanirwa kuitwa nekukurumidza. Chinhu chakakosha mune izvi ndechekuti mitambo yemagetsi inofanira kudzoserwa kubva kumusoro kusvika pasi. Vanhu vacho vanofanirwa kunge vaine chirevo chakananga uye chirongwa chinofanirwa kuve chakagadziriswa zvakanyanya. Kujekesa kunokosha.
13 May 2020 pa 00: 59
Martin, kana ndikanzwisisa zvakanaka unotsanangura chimiro chakafanana icho de facto chinomisa bumbiro riripo "Muzita reVanhu". Izvi zvinoreva kuti kupera kwehumambo hwebumbiro remutemo, hunomiririrwa neinonzi yeparamende "democracy". Saka Republic ...
Zvakanaka ndakagara ndichifunga kuti yaive nzira inoshamisa yakazara izere nekupokana. Munguva yezvidzidzo zveSocial Science paGymnasium, vadzidzisi vaifanira kugara vachipindura mubvunzo uri nyore "Zvinove sei demokarasi kana (hurumende) vapika vachipika kutendeka korona?" Papi pacho ini ndobva ndakwanisa kutarisa tarisa muchova .. zvishoma zvachinja mune izvo.
12 May 2020 pa 23: 35
Makambani aya achafanirwa kutora chikamu mukuchinja kwakadaro uye kunyanya mubazi rezvemari. Izvozvi zvakare tinogona kudzokera kuhurongwa uko vanochengetera mari uye vanoita zvemitemo vanova varidzi. Kuvhota pane semuenzaniso mabhonasi, mari yemubhadharo uye dzimwe nyaya dzakakosha dzinogona kuitwa kuburikidza necha blockchain. Mushure meizvozvo, mamwe zvikamu zvinogona kushandurwa. Rimwe rematambudziko aripo pari zvino inyaya yekuti mauto emarudzi mazhinji anosarudza hurongwa hwehurumende. Ini ndinofunga izvi zvinofanirwa kunge zvakagadziriswa mudanho rekutanga.
12 May 2020 pa 23: 54
Mhinduro yako mhinduro yakanaka neazvino matekinoroji. Asi ini ndinoshamisika ndichinetseka kuti inguva yetekinoroji ino ichagara kwenguva yakareba Tatoona zvekutanga kufanoonekwa. Iyo yakasikwa ichaona kuti zvese zvakagadzirwazve. VaElal satalites vanomira kushanda, internet ichadzikira, vanhu vanofanirwa kudzokera kumashure. Egoism haisi kuzorarama munzvimbo dzakakwirira.
Isu tatova padhuze nepapo patinoziva nezvemamiriro ezvinhu. Tinopomera vamwe asi isu tinobhadhara isu pachedu. Tese tine Microsoft anoshanda masystem kumakomputa edu. Isu tese tinobhadhara mutero unobhadhara Willy, Rutte nehondo.
Isu tinongofanira kureurura mhosva uye nekuuya nemhinduro senge iwe tingaite sei kugadzirisa zvinhu pachedu.
Mataura chokwadi, zviri kwatiri. Chinangwa chekuvapo kwedu ndechekuti tisvike pakushanda isu pachedu. Fara uye utende iwe pachako uye mweya wako uye rega mweya wako utonge ego yako.
Ukasazviongorora, mumwe munhu achazviita!
14 May 2020 pa 00: 57
zvirokwazvo kune chiverengero chakati chemuenzaniso apo matanho epfuma ari kutosarudza analog kusiyanisa kuwedzera kana sekutsiva kweshanduro yedhijitari.
13 May 2020 pa 09: 20
Haukwanise kubatsira asi kubvuma
asi ndiani watinoenda naye.
Havaendi kure nokuzvidira uye neA4 pepa rizere nezvikumbiro?
Iyo Crown's squires inofanira kutanga yaziva, maiwe, hongu
13 May 2020 pa 09: 30
Chinhu chinonakidza ndechekuti vanhu vangade shanduko, asi havatendi kuti isu tinofanira kuva rudzidziso isu pachedu.
Iwe unogona kusimbisa izvi nekutanga yakananga yedemocracy muenzaniso. Izvi zvinoreva kuti iwe unofanirwa kuzviita pachako.
Tinonyunyuta uye vanoti hapana chavanoita muThe Hague. Isu tinonyunyuta neakadai sekuti: "Mapato anopikisa aripi!"
Shanduko yega chaiyo inogona uye inogona kunyatsouya nekudzidzira iwe pachako. Icho chinoshanduka kuve nhanho yakanyanyisa kure kune vazhinji.
Tinoda kuverenga zvakaipa pamusoro pekuvharika, zvakaipa nezve vacccin uye zvakashata nezveBill Gates, asi kuzvimisikidza kamwe kamwe idanho rakanyanya kure.
13 May 2020 pa 09: 47
Izvo zvakakosha kuti unzwisise nheyo yekutanga yemari yakachengetedzwa. Iwe hauna kuchengetedza mari inodhindwa isina kuvhurika uye isina kuvhurika (sezvazviri panguva yeKutambudzika) uye nekudaro inokonzeresa hyperinflation (inonzi zvakare 'fiat mari') kana uine mari yakabatana neyakaenzana, segoridhe kana oiri. Iyo OPEC chiyero chemafuta kubvira ipapo chakaderera, nemitengo yemafuta ichiva yakaipa. Mwero wegoridhe wakaburitswa makore apfuura. Bitcoin inoita kunge iri chiyero chitsva.
Zvekare zvakare kune njodzi yekusaenzana, kubatana neAI, asi nenzira inoita senge isinga kumira, unogona kudzosera piramidhi remagetsi.
Heano kutsanangurwa kwemaitiro akadai "goridhe" inoshanda:
13 May 2020 pa 09: 57
"Fiat mari" kana "fiduciary mari" imari isingawane kukosha kwayo kubva pazvinhu zvakagadzirwa kubva (kukosha kwayakaita kunge goridhe nesirivheri yemari), asi kubva mukuvimba kuti inogona kushandiswa kutenga zvinhu nemasevhisi. Iko kukosha kwezita saka hakuna kubva kune imwe huremu uye zvemukati yesimbi yakakosha, asi pane chivimbo chekuti vashandi vehupfumi vanoisa mukukosha kwemari.
Mune ino nguva yedambudziko rekorona, mari yehupfumi iri kukurumidza kuora. Ndiyo mamiriro asingagadzikisike.
13 May 2020 pa 11: 29
Pane kudyidzana kwakananga pakati pemari nesimba. Pasina mauto eUS uye kugona kusarudza zvehondo, dhora ingadai isina kukosha. Uye zvirokwazvo kufarira kwemauto eAmerica, mauto, kuchengetedza America hegemony pamadhora.
13 May 2020 pa 10: 09
Tarisa nechezasi kurudyi kuti kangani goridhe, sirivheri uye crypto inotengeswa (papepa). Izvi zvinoreva kuti, semuenzaniso, vanhu 173 vanoti 1 oz ye sirivha, 172 vakatenga mweya. Iko kukosha kwesirivheri muUSA imadhora makumi mairi nemakumi maviri nemashanu, kukosha kwakakodzera kwedhora 👻
Bass Ruigrok akanyora kuti:
13 May 2020 pa 12: 36
National Socialism yakagadzira yemahara mari hurongwa iyo yakagumisa chikwereti chevanhu ndokunzvenga ivo vamabhangi….
Naizvozvo kusingaperi manyepo nezveNational Socialist Germany.
Fungidzira kuti kutsamwa kuchange kwakaita sei kana vanhu vaziva kuti iyo yakanyanya kunaka system yaparara nevanonzi vanoburitswa.
Pamusoro uye pazasi, zvakanaka zvakaipa, munyengeri akabatwa.
Chinhu chimwe chete icho Ghadaffi naSaddam Hussein vakaedza kuita ...
13 May 2020 pa 16: 22
Chikamu chakanaka Martin.
Mubvunzo ndouyu, uye pamusoro pezvose, kuti unoenda sei kunotora mapurisa nevemauto. Iwe unofanirwa kuitora neizvi. Ini handina kuzombonzwisisa kuti nei uchauraya munhu seuto. Muhondo yausingazive chaicho chikonzero chehondo iyoyo. Pakuraira uye pasi pekunyepedzera kwenhema kwe.
Ndichiri kukwanisa kubvumirana nemapurisa, asi kwete kana maboss ako akakuudza kuti utore kuratidzira. Ini mune chero nyika.
Uyezve, zvandakafunga, uye newe wave pachena. Jensen chete freemason. Saka 1 yavo, ini ndinoiona yekunakidzwa ndichidya. Asi mukomana iyeye haasi kunyatsoenderana mune yake nyaya. Ingoramba uchinzwira tsitsi pamusoro peTrump.
Ipapo nyaya yeiyo Hapana Chitambi haibvumiri zita rayo mukuita kwevanhu. Uye kuti iwe unofanirwa kunyora Jansen kana Jensen ipapo iye ari makumi matatu nemasere. Izvo zvakapera, uye zvakare benzi. Jensen anonzi akavharirwa neGS. Asi ipa Jensen 33 semuenzaniso. Uye anotora mapoka mazhinji musungo. Zvakare vhidhiyo yakadzimwa iine mamirioni zana nemakumi mairi nemaonero, verenga Masonic nhamba 33. Uye zvese izvo maoko emaoko hazvisi pasina. Anotyisa mukomana saka Etc etc. Kupinza uye nekukurumidza anoona kubva kwauri.
16 May 2020 pa 09: 22
vanokwanisa kuisa nyasha dzaMwari munzvimbo isina zuva. Iyo inoramba iri mutambo wevasina kusaziva ..
16 May 2020 pa 23: 14
SeMambokadzi yakamisa Paramende yeBritain muna Nyamavhuvhu 2019, iyo yakatengeswa nevatori venhau saBoris Johson uyo akakumbira mvumo kuna mambokadzi. Nekudaro, mubumbiro reBritish, monarch ine (yakasarudzika) masimba akachengeta kana monarch yakarairwa nekanzuru yevashandi.
17 May 2020 pa 13: 23
"Zvakafanana mutemo" rinobva kune zvakajairika (maifuckers), mambokadzi ari pamusoro pemutemo uye idd achingori mukutonga kweCommonwealth (Canada, Australia, NZ nezvimwewo). Sezvinongoita Madurodam ichingori monarchy yebumbiro pamwe neparamende (vachitaura groin) theatre.
16 May 2020 pa 14: 44
18 May 2020 pa 13: 49
Iyo firimu rakanaka uye rinoda kunakidza. Iyo heroine iyo inenge ichinyatso kudana izvo zvave zviri pawebhusaiti iyi kwemakore. Zvinenge zvakanyatsoitika, nekuti zvinodaidzira zvekare kuti "simba rakakwirira" kushandura.
Mukadzi uyu anogona kuve neakanakisa kwezvinangwa, asi zvinosiririsa kutaura kwavo kwemoyo hakuchinje chero chinhu mukanzuru mavakapa kutaura uku.
Sezvinotsanangurwa naMartin, shanduko chaiyo inobva mukati. Kana kutaura kwemukadzi uyu kuchinyatso kubva pachavo, saka iye akanaka musarudzo yekumisikidzwa mukati meiyo nyowani system inotsanangurwa pamusoro apa
« Vhidhiyo Plandemic Dr. Judy Mikovits ndeye Chiitiko 201 mhando yemanyepo enhau musungo (vhidhiyo)
Kuderera kwakanyanya kwemari panguva yedambudziko re corona kunotungamira ku hyperinflation: bitcoin ndiyo mhinduro here? »
Kushanya kwakazara: 2.421.034